Dianetics - IDianetics ulwazi lwale mihla ngempilo yenogondo
Visit the IDianetics Site in	 Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belorussian Bengali Brazilian Bulgarian Chinese (Mandarin) Croatian Czech Danish Dutch English Persian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Kazak Korean Latvian Lithuanian Macedonian Nepalese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Sinhalese Slovakian Slovenian Spanish Swahili Swedish Taiwanese Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Zulu
IDianetics iveza into enye ebangela ubuhlungu, ukungonwabi nokungazithembi ebomini bakho
- ingqondo echasayo.
Kwaye ikubonisa indlela yokuyoyisa loo ngxaki.
Iphephandaba iNew York Times iyibonga njengenye yeencwadi ethe yanceda izigidi ngezigidi zabantu ukuze baphile kakuhle babe nempilo entle.
Ngaphezu kwe-18,000,000 yeekopi sezithengisiwe.
Ingaba kukho tshaba oluzifihlileyo olungafuni uphumelele nangona usebenza nzima? Ewe, lukhona.
Lubizwa ngokuba yingqondo echasayo. Yiyo ebangela ukuba woyike, ungazithembi, uve umphefumlo uthe khulumembe, kwakunye neentlungu zomzimba. IDianetics yeyona kuphela engakunceda ukuba ulwe nale ngqondo ichasayo ude uzazi iziphiwo zakho.
Abafundi abohlukeneyo beDianetics bayayivuma ukuba yabanceda kwezi:
Ukuba bazithembe ebomini babo.
Baphumelela ukuphumekeza iminqweno yabo.
Bayazingca ngobuntu babo.
Basoloko bephumelela kwizinto zonke abazenzayo.
U-L. Ron Hubbard ngomnye wababhali abaziwayo, kwaye iincwadi zakhe zifundwa kakhulu elizweni lonke. Sele ethengise ngaphezu kwe-120,000,000 yeekopi zeencwadi zakhe ethe yashicilelwa kwiilwimi ezingaphezu kwamashumi amahlanu. Iimfundiso zakhe zincede izigidi ngezigidi zabantu ukuba bafumane olona lonwabo nokuziphatha bekhululekile ebomini.
Thenga le ncwadi, yifunde, uze uyisebenzise.